Xabi Alonso Oo U Sahlay Spain Inay Dhaafto France Islamarkaana Gaaraan Semi-finalka Euro 2012. - jornalizem
Xabi Alonso Oo U Sahlay Spain Inay Dhaafto France Islamarkaana Gaaraan Semi-finalka Euro 2012.
ulka difaacanaya koobka qaramada Yurub ee Spain ayaa u soo baxay semi-finalka Euro 2012 ka dib markii ay 2-0 ku dardareen xulka France, waxaana ay wareega afar dhamaadka la ciyaari doonaan xulka Portugal.
Ciyaar xiiso badan oo ka dhacday Donetsk ayaa Spain u sahashay inay kubada iska heysato qeybtii hore ee ciyaarta, waxaana ay heleen fursado qaali ah balse goolka guusha ayaa yimid daqiiqadii 19aad ee ciyaarta markii Xabi Alonso uu madax ku dhaliyay kubad qurxoon.
Alonso oo ay u aheyd kulankiisii 100aad ee heer caalami ayaa kula dabaaldegay gooshiisii 14aad ee Spain isagoo sidoo kalena u xirta numberka 14aad.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay goolkaas oo ay hogaanka ku heysay Spain, waxaana qeybtii labaad markii la isku soo laabtay ay Faransa la soo baxday ciyaar ka duwan tii qeybtii hore, waxaana ay bilaabeen inay raadiyaan goolka barbaraha.
Labada kooxood ayaa qeybtii labaad fursado fiican isweydaarsaday lakiin midkoodna kama faa’ideysan, ilaa iyo Pedro lagu galay rigoore daqiiqadii 90aad ee ciyaarta.
Waxaana rigooradaasi gool u sarifay ciyaaryahan Xabi Alonso oo dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta ahaana goolkiisii 15aad ee Spain, islamarkaana Spain u xaqiijiyay booskooda semi-finalka Euro 2012, iyagoo la ciyaari doona xulka Portugal.
Waxaana ay haatan Spain talaabo fiican u qaaday inay difaacato koobkaan Euro oo ay ku guuleysteen 2008dii, iyagoo ku dhow haatan inay noqdaan xulkii ugu horeeyay adduunka ee seddex koob oo isku xigta qaada.